Big City Small World (Series 1 Episode3- Kicked Out!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on March 23, 2012 at 16:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode3- Kicked Out! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၃) နှင်ထုတ်ခံရပြီ)
Harry က သူ့ရဲ့အလုပ်မှာတော့ ကျွမ်းကျင်တယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ခကလည်း ဈေးမပေါဘူးလေ။
Series 1 Episode3- Kicked out! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Olivia: Hi there Harry!
ဟယ်လို Olivia။ အခြေအနေဘယ်လိုလဲ?
သတင်းစာရဲ့  အလုပ်ခေါ်စာ စာမျက်နှာကို ကြည့်နေတာပါ…
ထပ်ပြီးတော့လား။ ငါထင်တာက နင့်မှာ ရွေးချယ်ဖို့ အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်တွေ အများကြီးရှိပြီးပြီထင်တယ်…
အင်း၊ ငါ့မှာရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် ထပ်ကြည့်ထားတာတော့ မမှားနိုင်ဘူးလေ။ မဟုတ်ဘူးလား?
ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုတော့ သိထားသင့်တယ်လေ...
ကစားပွဲရဲ့  အရှေ့  ကိုရောက်နေအောင်ပေါ့။ (ရှေ့ တစ်လှမ်း ကြိုလှမ်းထားပေါ့ရှင်။)
ငါကတော့ အင်တာနက်ကလဲ အလုပ်တွေရှာဖို့ နေရာကောင်းလို့ ထင်တယ်နော်...
နင်ပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါက နေ့တိုင်း ကွန်ပြူတာတွေရှေ့ မှာ ထိုင်နေရတာလေ။ ခဏတစ်ဖြုတ် အပြောင်းအလဲလေးတွေက မဆိုးပါဘူး။ ကဲ Olivia, ငါတို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို ဘာထပ် စဉ်းစားထားလဲ... နင့် ၀က်(ဘ)ဆိုဒ်လေ?
အင်း..ငါပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ နင့်ကို လုပ်စေချင်တယ်!
ကောင်းတယ်။ ငါလည်းလုပ်ချင်တယ်။ ကဲ၊ သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင် ဒီလိုအလုပ်မျိုးအတွက် ငါကတော့ တစ် grand တောင်းတယ်။
A “grand” ဆိုတာဘာလဲ?
Harry: It isn’t really...that’s what these things cost now...if you take into account the work I’ll have to put into it, and all my time.
တကယ်တော့ မများပါဘူး။ ဒါတွေက အခု ဒီလောက်ပဲကုန်ကျတယ်... အလုပ်လုပ်ရတာကိုတွက်မယ်ဆိုရင် ငါက ငါ့ရဲ့ အချိန်တွေ အကုန်ပေးရတာကိုး...
Harry: But anyway, because we’re friends, I’ll do it for say, seven fifty...?
ဒါပေမယ့်လည်း ငါတို့က သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေတော့ ၇၅၀ လောက်နဲ့လုပ်ပေးမယ်လေ?
၇၅၀...အင်း...ငါ့ကို စဉ်းစားခွင့်ပေးမလား? ငါနင့်ကို တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်းအဖြေပြန်ပေးမှာပါ။
ခဏလေး။ ငါကော်ဖီယူလိုက်ဦးမယ် ပြီးရင် နင်တို့ဆီလာခဲ့မယ်... အိုကေ. Cheers! ကဲ၊ အခြေအနေတွေဘယ်လိုလဲ?
Harry ကမ်းလှမ်းချက်အတွက် စဉ်းစားပြီးပြီလား?
Harry: Sure, yeah... I’m up for it! I’ll do it, no problems
အင်း...စဉ်းစားပြီးပြီ... ငါလက်ခံပါတယ်။ လုပ်မယ်လေ။ ကိစ္စမရှိပါဘူး
ကောင်းတယ်။ ငါတို့လည်း တစ်ကယ်လိုအပ်နေတယ်။ ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲ?
အင်း... အနိမ့်ဆုံး ကတော့ ၁၅၀၀ ကျမယ်။
အဆင့်မြှင့်တာတွေ နဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခတွေနဲ့ဆို၊ အင်း၊ နှစ် ငါး အထိတော့ တိုးသွားမယ်...
ခင်ဗျားက ဈေးသိပ်မပေါဘူးနော် Harry?
ငါက ငါ့အလုပ်မှာတော့ တော်တယ်။
ငါ့ဦးလေးနဲ့ စကားတော့ နည်းနည်း ပြောလိုက်မယ်... သူနဲ့ ညှိလို့ ရမလားလို့။ မင်းကို အကြောင်းပြန်ပါ့မယ်။
သူ အခန်းကနေ ဆင်းပေးရမယ်… နောက်ထပ်နေဖို့နေရာ ထပ်ရှာရမယ်…
Permalink Reply by Ratan Biswas on March 24, 2012 at 18:40
Permalink Reply by powerwhitemann on March 24, 2012 at 19:13
thank you very much, very good for reading
next time, i will looking forward to your sending.
Permalink Reply by Su Mon Thwe on March 24, 2012 at 21:35
Permalink Reply by Ye' Yint Aung on March 25, 2012 at 21:44
Permalink Reply by win win shwe on March 26, 2012 at 17:12
Permalink Reply by lovealone on March 29, 2012 at 8:00
Permalink Reply by Zaw Win on May 8, 2012 at 13:43
Please postalot to learn.
Permalink Reply by Lone Lone on May 24, 2012 at 10:31
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်လည်း ဆက်လက်ပို့ချပေးပါ။
Permalink Reply by peter TinMinAung on July 3, 2012 at 11:38
Permalink Reply by ayeayethat on July 7, 2012 at 16:23
အခုလို သင်ကြားလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ---------
Permalink Reply by Eindaray Kyaw on July 18, 2012 at 15:44
ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အချင်းချင်းတောင် နားမလည် တဲ့ စကား နှစ် လုံးပါတယ် နော်။ '' A grand '' နဲ့'' Quid '' လေ။ ဘယ် စကားလုံးအမျိုးအစားများလဲ မသိဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ။ သိတဲ့ သူ များရှိရင် ပြောပြ စေလို ပါ တယ်။
Permalink Reply by Margaret on July 31, 2012 at 6:54
Thank You. How can I download this recording?